Mahdi oo Somalia ku matelaya Shir ka dhacaya Jordan
MUQDISHO, Somalia - Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka, Mahdi Maxamed Guuleed [Khadar] ayaa maanta oo Arbaco ah wuxuu ka duulay garoonka diyaaradaha Muqdisho, isaga oo kusii jeeda wadanka Jordan.
Ujeedka safarka ku simaha wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegay inuu yahay ka qaybgalka ay shir balaaran, kaasi oo ay isugu imaan doonan qaar kamid ah dalalka Carabta.
Shirkaan oo maalmo soconaya, islamarkaana Soomaaliya loosoo diray caasuumaad kasoo qaybgal ayaa diiradda lagu saarayaa arrimo ku saabsan Isbedalka cilimadda aduunka iyo waliba degaanka.
"Waxa aan maanta u dhoofayaa dalka Jordan oo aan kaga qayb gelaayo shir ay leeyihiin madaxda wadamada Carabta oo lagaga hadli doono Is-bedelka Cimillada adduunka iyo deegaanka," ayuu Khadar u sheegay warbaahinta.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in mudada uu shirku socdo ay kasoo baxaan qodobo miro dhal ah, oo ay dan ugu jirto shacabka iyo dalka Soomaaliyeeed iyo caalamka.
Dooda ku saabsan Is-bedalka cilimada caalamka oo soo jiitameysay tan iyo markii lagu saxiixay magaalada Paris sanadkii 2016-kii ayaa kamid ah waxyaabaha ugu culus oo ay isku hayaan awoodaha kownkaan.
Soomaaliya ayaa safka hore kaga jirta dalalka saameynta ugu balaaran ay ku yeelan karto Is-bedalka cilimada, maadaama dadkeeda ay ubadan yihiin Xoolo dhaqato iyo Beeraley ku tiirsan tacabka kasoo go’o Beeraha.
Dad badan oo dhalinyaro Soomaali ah ay ku jiraan ayaa lagu dilay weerarka Kenya.
Dowladda Somalia iyo hay'adaha samafalka oo dalbaday in ka badan 1 billion oo gargaar ah
War Saxaafaded 21.01.2019. 15:35